कन्या र तुलाको प्रेम सम्बन्ध कुन राशीसँग कस्तो हुन्छ ? हेर्नुहोस्
डिसेम्बर 12, 2018 डिसेम्बर 12, 2018 साइन्स इन्फोटेक	3 Comments प्रेम, राशी
कन्या र तुलाको प्रेम सम्बन्ध कुन राशीसँग कस्तो हुन्छ ? संसारमा जम्मा १२ राशी रहेको छ र राशी अनुरुप स्वभाव अलग अलग हुन्छन् र यी राशिको स्वभावका आधारमा सम्बन्ध, दोस्ती, प्रेम प्रसङ्ग पनि निर्भर हुन्छ । कतिपयलाई त कोतुहुल्ता होला कुन राशिसंग बिबाह गर्दा राम्रो होला भन्ने कुरा । तपाईको राशिले निर्धारण गर्छ कस्तो साथी पाउनुहुन्छ । कन्या र तुलाको प्रेम सम्बन्ध कुन राशीसँग कस्तो हुन्छ ? भन्ने तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
जुन मानिसको राशि कन्या हो त्यो मानिसका लागि वृष, कन्या वा मकर राशिका साथी उत्तम मानिन्छ । यिनीहरुको प्रेम सम्बन्ध उत्तम हुन्छ । कन्या राशिका मानिसका लागि कर्कट, वृश्चिक वा मीन राशिका साथी सामान्य मानिन्छन् । यिनको प्रेम सम्बन्ध आपसी तालमेलमा अधिक निर्भर रहन्छ । मेष, सिंह र धनु राशिका मानिसका साथ कन्या राशिका प्रेम सम्बन्ध सफल हुने संभावना ५०–५० रहन्छ ।
तुला राशिका मानिसका लागि मिथुन, तुला वा कुम्भ राशिका साथी सबैभन्दा उत्तम मानिन्छन् । यिनीहरूको प्रेम सम्बन्ध उत्तम हुन्छ । यदी कुनै व्यक्तिको राशि तुला हो र उ मेष, सिंह वा धनु राशिका साथी छनौट गर्न चाहन्छ भने यो जोडी सामान्य रहन्छ । जुन मानिसको राशि तुला हो उनको लागि कर्कट, वृश्चिक वा मीन राशिका व्यक्तिसँग प्रेमसम्बन्ध सफल हुने संभावना ५०–५० हुन्छ । तुला राशिका लागि वृष, कन्या वा मकर राशिका साथ जोडी बन्नु / बनाउनु त्यति राम्रो मानिदैन ।
← पिनासको दोहोलो
मुख बाङ्गिने रोगको प्राकृतिक उपचार →
नोभेम्बर 30, 2018 साइन्स इन्फोटेक 14
3 thoughts on “कन्या र तुलाको प्रेम सम्बन्ध कुन राशीसँग कस्तो हुन्छ ?”
Pingback:ज्योतिषशास्त्रमा राशी भनेको के हो ?